ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၁ လပိုင်းအတွက် ဟောစာတမ်း – WunYan
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ၁ လပိုင်းအတွက် ဟောစာတမ်း
Posted on January 6, 2018 by whuk-46651
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း/ဌာနနေရာပြောင်းရွေ့ရခြင်း များပြုလုပ်ရမည်။ စီးပွားရေးအောင်မြင်မည်။ ငွေချေးငှားခြင်းစပ်တူရှယ်ယာလုပ်ခြင်းအထူးရှောင်ကြဉ်ပါ။ဟဆုံးရှုံးထားသောငွေများပြန်လည်ရရှိမယ်။ ရပ်ဝေးနယ်ဝေးသို့ခရီးထွက်ရမည်။ အတည်တကျလုပ်ရသည့်လုပ်ငန်းများအဆင်ပြေမယ်။ နိုင်ငံခြားခရီးကံကောင်းမည်။ လူမျိုးခြားအကျိုးပေးမည်။ အနုပညာရပ်တွေမှာ ထူးချွန်တတ်သည်။ သွားကိုက်သွားနာသတိပြုပါ။ ရာထူးတိုးပြီး အလုပ်ပြောင်းရကိန်းရှိသည်။ ဘုရားဖူးခရီးထွက်ရတတ်သည်။ သူတစ်ပါးထံမှ ငွေမချေးရ။ မြောက်အရပ်သို့ ခရီးမသွားရ။ စီးပွားရေးဤလတဝက်ထိ သိပ်အဆင်မပြေမှု့များနှင့်ဖြစ်နေမည်။ ကွဲကွာနေသောမိတ်ဆွေများမိသားစုများနှင့်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖြစ်မည်။။ ဆုံးရှုံးထားသောငွေများပြန်လည်ရရှိတတ်မယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းချစ်သူခင်သူမိသာစုးအတွက်စိတ်ပူပေးရတတ်တယ်။အဆိုးအညံ့အလုံးစုံကင်းစင်၍အလိုဆန္ဒရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မယ်။ ငွေကြေးကံကောင်းမယ်။ အလုပ်အဆင့်တိုးတက် ပြီး ဆောင်ရွက်ရသည့် ကိစ္စမှန်သမျှတွင် အတိုက်အခံများလိမ့်မည်။ စာရင်းဇယား ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရတတ်သည်။
အချစ်ရေးမှာချစ်သူနှစ်ဦး အတွက် ပျော်စရာအကောင်းဆုံးသာယာချမ်းမြေ့ဖို့အကောင်းဆုံးကာလပါ။ ချစ်နေပြီးသူတွေ လက် ထပ်ဖို့ တာစူနေကြသူတွေဆိုရင်တော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ထိမ်းမြားဖို့ အခြေအနေပေးတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အနှောင့်အယှက်မျိုးတွေပဲ ရှိနေနေ၊ လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားရင်မလွဲမသွေအောင်မြင်မှာပါ ချစ်သူဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးရသလို တစ်ဘက် ကလည်းစီးပွားတက်ရာထူးတက်ပြီးအဆင်ပြေမယ်။ ပညာရေးမှာတခြားမည့်သည့်စာမေးပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်နိုင်တယ်။ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေပြီး ပြတ်နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် တခြားလူမှုရေးသောက၊ စီးပွားရေးသောကပညာရေးသောကတွေ ကင်းစင် နေတာကြောင့် အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကူးသမျှ အကောင်အထည်ဖော်ပြီး ချစ်နိုင်ကြပါမည်။ အိမ်ထောင်ရေးလည်းကောင်းပါမည်။
ယတြာ-မိမိမွေးနံဂြိုဟ်ဘုရားတွင် ထောပတ်ဆီမီး (၇) ခွက် ထွန်းညှိပူဇော်ပါ။ သို့မဟုတ် မီးချောင်း ၊ ဖန်ချောင်း ၊ ရောင်စုံမီးသီးများ လှုဒါန်းပါ။
ဆွေမျိုး၊ မိသားစုတို့၏ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမည်။အထင်လွဲခံရမယ်။ အလုပ်၌အထူးကံကောင်းလာပြီးဆရာကောင်းနှင့်တွေ့ဆုံမည်။်လူမှုရေး၌အထူးလူချစ်လူခင်ပေါ်များမည်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးမပြေပြစ်စေကာမူတပည့်လက်သားအလုပ်သမားမိတ်ဆွေတို့နှင့်အဆင်ပြေတိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်သည်။ ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် ရှေ့သို့မရောက်ဘဲ တိုးလို့တန်းလန်းဖြစ်နေမည်။ ဟိုဟာလုပ်ရကောင်းနိုးနိုး ဒီဟာ လုပ်ရကောင်းနိုးနိုး နဲ့ အချိန်ကုန်သွားတတ်ပါမည်။ ဒုက္ခကြီးကြီးမားမား မဟုတ်သော်လည်း စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်စရာတွေတော့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာကံကောင်းချင်ရင်တော့ဘာပဲလုပ်လုပ်မြန်မြန်လုပ်ပါ။ ဖြတ်ကနဲပေါ် ဆတ်ကနဲချက်ချင်းထလုပ်ပါ။ အဲ့လိုလုပ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်။ လုပ်ငန်းများတွင်အနှောင့်အယှက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရမည်။စိတ်ပျက်စရာများကြုံတွေ့ရတတ်မည်။အများနှင့်အတိုက်အခံဖြစ်ရမည်။ငွေအကုန်အကျများနေမည်။ကျမ်းမာရေးဝမ်းဗိုက်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာအောင်မြင် မှု့ များခံစားရပါမယ်။ အလုပ်အကိုင်များမှာတော့ ကုန်သွယ်မှု များ အောင်မြင်မှုရနေပြီးတချို့အလုပ်များပြသနာအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါမယ်။ အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းများမစ၍အလုပ်၌အဆင်ပြေလာတော့မယ်။ မိတ်ကောင်းဆရာကောင်းတွေ တွေ့မယ်။ ပညာရေးကိစ္စ၊ သင်တန်းကိစ္စ၊ စာမေးပွဲကိစ္စတွေ အထူးကောင်းပါတယ်။ စပ်တူကိစ္စတွေလည်း အောင်မြင်မယ်။ စာချုပ်ချုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေလည်း အဆင်ပြေမယ်။မထင်မှတ်တဲ့ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ရာထူးနေရာကိစ္စတွေမှာလည်း အနှောင့်အယှက်တွေကြားက အောင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်။ စပ်တူအလုပ်များသတိထားပါ။
အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စမှာ စိတ်သဘောထားအဆင်မပြေကြုံတွေ့တတ်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေး အတွင်းလူ ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီ ပျော်စရာအကောင်း ဆုံး ကာလပါ။ ချစ်သူနဲ့စိတ်သဘောထားခြင်းတိုက် ဆိုင်ပြီး အပူအပင်မရှိ သာယာကြည်နူးရမယ်၊ ချစ်သူမဖြစ်သေးရင်လဲ ကိုယ်ကစွဲလမ်းနေ သူရဲ့ ခေါင်းညိတ်အဖြေစကားကို ကြားရမယ်၊ ချစ်သူ ဟာကိုယ့်အလိုဆန္ဒကို လိုက်လျောလွန်းတာကြောင့် သတိတရားတော့ရှိရမယ်၊ ချစ်သူအပေါ် စောင့်ထိန်း ရမယ့် သိက္ခာတရားကို စောင့်ထိန်းကြရမည်။ အနေဝေးနေတဲ့ချစ်သူတွေအတွက်ကအလွမ်းတသသနဲ့အနေဝေးခြင်း ဒဏ်ကိုအလွမ်းကျပြီးခံစားနေပါမယ်။?အချစ်ရေး၌ဤအဖြစ်ပျက်တွေကြိုတင် သတိထားပြီးဆင်ခြင်နိုင်ရင်တော့နှလုံးသားရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှစိတ်သောက ပွားစရာမလိုပါဘူး။
ယတြာ-မိမိမွေးနေ့၌ ဘုရားမှာ ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူပါ။ ဆီထမင်း ကပ်လှုပူဇော်ပါ။
ငွေကြေးမြောက်များစွာ ၀င်မည်။ အလှူဒါနများ ပြုလုပ်ရမည်။ အမှုအခင်း ကိစ္စများ ပြဿနာများ အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်တတ်မည်။ သွားလေရာ မျက်နှာပွင့်လန်းမယ်။ စီးပွားရေးအထူးကောင်းမဲ့အချိန်ပါပဲ။ အလုပ်အကိုင်မှာ ပြိုင်ဆိုင်မှု့များ တွေ့ ရမည်။ လုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ တီ့ထွင်ခြင်းအလုပ်အသစ်စတင်ခြင်း အထူးကောင်းပါလိမ့်မည်။ ငွေကြေးလဲအဖက်ဖက်ကဝင်လာတတ်ပါတယ်။ ဆိုင်ခန်းကိစ္စ၊အိမ်ကိစ္စ၊အလုပ်ကိစ္စ အခက်အခဲ့ကြုံနေသူများပြန်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။စပ်တူကိစ္စ၊ ရှယ်ယာကိစ္စများလုပ်ကိုင်၍ အကျိုးပေးလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ပက်သက်သော ပစ္စည်းများလက်ဆောင်ရမယ်။ ပညာရေးကိစ္စ ၊အင်တာဗျူးကိစ္စ၊အောင်မြင်မယ်။ အရာရာစိတ်မောလူမောပြီးလုပ်ဆောင်နေရမယ်။ဘာလုပ်လုပ် တလွဲတချော်ဖြစ်နေတတ်သော်လည်း စီးပွားရေး၌ သိသိသာသာစီးပွားတက်မည်။သိကြားမ လိုက်သကဲ့သို့ လက်ရှိအခြေအနေထက်များစွာမြင့်တက်သွားလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းများ သိသိသာသာ အောင်မြင်မူ့ရမည်။ လုပ်ငန်သစ်များ စတင်ပြု လုပ်နိုင်သောကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဝေး၌ရှိမိတ်ဆွေများအကူအညီရကိန်းရှိတယ်။ စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ထားသည်များ မသေချာ မရေရာသော အနေအထားသို့ရောက်ရှိမည်။ လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်ယူသူ ပေါ့လျော့၍ ဆောင်ရွက်ထားသည်များ ဖရိုဖရဲဖြစ်လိမ့်မည်။ ငွေကြေးအပေးအယူကိစ္စမှန်သမျှ သတိနှင့် ဆောင်ရွက်ပါ။ အပြောင်းအလဲကိစ္စအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အခါကောင်းကျရောက်နေပါပြီ။ ရင်းနှီးသူများနှင့် စကားများရမည်။ သစ်လွင်သော အလုပ်ကိစ္စများကို ဦးတည်နေဆဲ ပြဿနာဟောင်းများ ပြန်လည်ဖြေရှင်းရမယ်။ လူမျိုးဘာသာမတူခြားနားသော သူများနှင့် တွဲဖက်လုပ်သော ကိစ္စများမှ အောင်မြင်မှု့ရမည်။ တရားမျှတမှုခုံမင်မည်။ ဘုရားဖူးခရီးများ စိတ်ချမ်းသာစရာခရီးများ ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးများ သွားရလိမ့်မည်။ ခရီးဝေးယာယီများလည်းသွားကောင်း၏။အဖိုးတန်ကျောက်။ကား မြေကိစ္စ၊ အမွေကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။ ငွေရှာရလွယ်ခြင်း ငွေအ၀င်အထွက် ကြမ်းခြင်းများ ကြုံလိမ့်မည်။ ရန်များခြင်းစကားများဖြေရှင်းရခြင်း/အထူးသတိပြုရန် အလုပ်တွင် အတိုက်အခံ အနည်းငယ်ကြုံရတတ်ပါသည်။ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်လျှင်အောင်မြင်မည်။ ပညာရေးကံကောင်းပါသည်။ ကျန်းမားရေးအနည်းငယ်ညံ့လိမ့်မည်။
အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်း၍အဆင်ပြေပါမည်။အချစ်ရေးမှာအပျို လူပျိုဖြစ်လျှင် ချစ်ခင်သူနှင့်တွေ့ရတတ်သည်။ ချစ်ရမယ့်သူနှင့်ဆုံတွေ့လိမ့်မည် ။ ချစ်သူရှိပြီးသား သူတွေအဖို့တော့ ထူးထူးခြားခြား မရှိနိုင်ပါဘူး၊ သာယာချမ်းမြေ.တဲ့အချစ် သက်တမ်းကာလလေးပေါ့တစ်ခုတော့ထူးခြားပါတယ်။ အချစ်ရေးကံစန်းပွင့်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ယတြာ- အိမ်ဘုရားတွင် ပန်းသီး ၇လုံးကပ်လှုပေးပါ။ မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်ပေးပါ။
မမျှော်လင့်ဘဲ အောက်လက်ငယ်သားတွေရဲ့ ဆန့်ကျင် တော်လှန်တာတွေကို ခံရတတ်သည်။ လုပ်ငန်းတွေမှာ အခက်အခဲတွေကြုံ တွေ့ရလိမ့်မယ်။ မမျှော်လင့်ပဲ စိတ်ညစ်စရာတွေ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ကိုလည်း စိတ်မဝင်စားတော့ဘဲ စိတ်လေနေတတ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အလုပ်ကနေ တခြားအလုပ်ကို ပြောင်းလိုစိတ် ပေါ်တတ်ပါတယ်။ မပြောင်းပါနဲ့။ လက်ရှိအလုပ်က တော်သေးတယ်။ သူတစ်ပါးအတွက် အာမခံပေးတာမျိုး၊ ကိုယ်စားလိုက်ပြီး ပြောပေးတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဒုက္ခရောက် တတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ငွေတွေ သူများလက်ထဲသွားပြီး မြုပ်နေတတ်ပါတယ်။ ခါးနာတာတို့၊ ခြေထောက်နာတာတို့လည်း ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ အိမ်တွင်းရေးလည်း အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အပျော်အပါးကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။အပေါင်းဖော်ချစ်သူခင်သူမိသားစုနှင့်အတူတကွနေထိုင်ရတတ်ပါတယ်။ ငွေဝင်သလောက်ပြန်လည်ကုန်ဆုံးတတ်မည်။အလုပ်၌ကံမကောင်း၍ သူတစ်ပါးနှင့်စကားများရတတ်တယ်။ငွေကံအာမခံမှုများမလုပ်ပါနှင့် လုပ်လျှင့်ပြသနာအကြီးအကြယ်ဖြစ်ကိန်းကြုံမည်။ စန်းပွင့်၍လူချစ်လူခင်ပေါ်များတတ်ပါတယ်။
အချစ်ရေးမှာချစ်သူဟာကိုယ်အပေါ်ကိုမကောင်းမြင်နေလိမ့်မယ်၊ သံသယတွေဝင်နေတတ်ပါမယ်။ တခြားအဆင်မပြေစရာတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံနေရတာကြောင့် ချစ်သူ (သို့မဟုတ်)အိမ်ထောင်ဘက်တို့ရဲ့ ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းကို မခံနိုင်ပဲအတိုက်အခံတွေဖြစ်လာ တတ်တယ်။ ဒီအတိုက်အခံတွေရဲ့ နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သံယောဇဉ်ကြိုးလေး ပြတ်တောက်သွားရခြင်းပါပဲ။ အဲ့ဒါကိုသတိလေးနဲ့နေပေးရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ ချစ်သူဆီက အချစ်အဖြေကိုတောင်းခံငံ့လင့်နေသူတွေအတွက်တော့ ဒီနှစ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာရမယ့်အဖြေ မရရှိနိုင်ဘူး၊ သူဟာကိုယ့်ရဲ့စကားတွေ ကို မယုံမကြည်ဖြစ်နေသေးတယ်။ ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ချို့ကြောင့် အထင်သေးပြီးချစ်ဖို့ မ၀ံ့မရဲဖြစ်ပေမယ့် တချို့အားသာချက်ကစန်းပွင့်နေလို့ ချစ်သူသစ်ရ ရင်ခဏတာပဲပျော်ရပါမယ့်တည်မြဲတဲ့ချစ်သူမဟုတ်လို့ပါ။ ချစ်သူရှိတဲ့သူတွေ (သို့မဟုတ်)အိမ်ထောင်ရှိတဲ့သူတွေက တခြားသူရဲအရိပ်ပြလို့တိတ်တိတ်ပုန်းအဲ့ဒီဘက်ဇာတ်လမ်းစချင်စိတ် ပေါက်ပါမယ်။ပညာရေးကံကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနည်းနည်းဂရုစိုက်ပါ။
ယတြာ- မိမိမွေးနံ့ဂြိုဟ်ထောင့်တွင် နွားနို့နှင့် ရေ သပ္ပါယ်ပေးပါ။
ကံတရားကိုဥာဏ်ကစားနေချိန်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်တက်လမ်းပွင့်နေမည်။လူတကာ၏ လှိုက်လှဲပျူငှာစွာ အရေးပေးမှုကို ခံရလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်မှု ခံရဖွယ်ရှိမယ်။ လောဘကို အတောင်မတပ်ဘဲ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ပါ။ အောက်လက်ငယ်သားအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေ ကြုံမယ်။ ပြဿနာတစ်ခု အလိုလိုရှင်းသွားမယ်။ သူများအတွက်စိတ်ပူပင်သောက ရောက်နေချိန်မိမိကြိုးစားခဲ့သမျှအဆင်ပြေလာ၍ပျော်ရွှင်နေရမယ်။ စီးပွားရေးမှ သတိထားရမှာက စပ်တူရှယ်ယာများအရူံးပေါ်နေချိန်ပါ ဂရုစိုက်ပါ။ အပေါင်းသင်းများကြောင့်စိတ်သောကအနည်းငယ်ရောက်နေရတတ်မည်။စီးပွားရေး၌ကံကောင်းခြင်းအကျိုးကိုစ၍ခံစားရမည်။ရပ်တန့်ထားသည့်အလုပ်များပြန်လည်စတင်နိုင်မည်။ ပိတ်ဆို့်နေသောငွေကံများ ပြန်ပွင့်မည်။ စိတ်ကူးသစ်များ ဆောင်ရွက်အောင်မြင်မည်။ ဝေးကွာနေသောသူများနှင့် ပြန်လည်ဆုံစည်းတတ်သည်။ အဆုံးသတ်ထားသည့် ကိစ္စများ ထပ်မံရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရမယ်။ မိတ်ဆွေကောင်းများထံမှ အထောက်အကူရမည်။ လုပ်ငန်းလုပ်နေသောသူများ ဝင်ငွေတိုးခြင်းရာထူးတက်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သူများ အလုပ်အဆင်ပြေ၍ အတက်လမ်းမြင်တွေ့ရမယ်။
သူတစ်ပါးစကား နားမထောင်ပါနှင့်။ ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆက်လုပ်ပါ။
အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများ အဆင်ပြေမည်။အိမ်ရောင်းအိမ်ဝယ်အောင်မြင်မည်။ ယခင်ဆောင်ရွက်ပြီး အဆုံးမသတ်ရသေးသော ကိစ္စများကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်။ လမ်းခွဲသူမှ ကိုယ့်အပေါ် ဒုက္ခပေးလာတတ်သည်။ ပညာရေးကံကောင်း၍အောင်မြင်မည်။အိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းမည်။။ အချစ်ရေးမှာ မိမိ၏နှလုံးသားရင်ခုန်သံကို မိဘများ၏ ဆန္ဒကြောင့် ဘရိတ်အုပ်ရပ်တန့်ရလိမ့်မည်။
ယတြာ- မိမိမွေးနေ့တွင် ရေနေသတ္တဝါအား ပေါက်ပေါက် ၊ ပေါင်မုန့် ကျွေးပါ။
စေတနာအပေါ် တန်ဖိုးမထားသောသူများနှင့် နားလည်မှု့မရှိ၊ အတ္တကြီးမားသော သူများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည်။ လူပေါင်းမှားခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားခြင်းများ ဖြစ်မယ်။ လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းများ တစစရပ်တန့်ချင်စိတ်ပေါက်လာမည်။ မိသားစုဝင်များ တစ်ဦးပြီးတစ်ဦး ကျန်းမာရေးအညံ့ဖြစ်မည်။ ဆွေမျိုး၊ မိသားစုတို့၏ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများကို တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရမည်။ ဆုံးရှုံးထားသော ငွေပြန်ရပြီးမှ ကုန်ဆုံးတတ်သည်။ ချေးငှားကာပြန်မပေး၊ စက်ပစ္စည်းများ အပျက်အစီးများမယ်။ ယာဉ်၊ကားအဝင်မတော်ပါ။ ကျန်းမာရေးလဲ အနည်းငယ်ညံ့နေတတ်ပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အုပ်စုဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေခံရတတ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးသူတွေနဲ့ စကားများခွဲခွာရမဲ့အချိန်ပါပဲ။ မသွားချင်တဲ့ခရီးတွေသွားရတတ်ပါတယ်။အလုပ်ကိစ္စတွေ၊လူမှုရေးကိစ္စတွေကြောင့်အိမ်မကပ်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မျော်လင့်ထားတာတွေ အထစ်အငေါ့ကြုံပြီးမှ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ စက်ပစ္စည်းများ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအဝင်မခံသင့်တဲ့ကာလပါပဲ။ ခရီးဝေးကိစ္စ နိုင်ငံခြားကိစ္စခဏဆိုင်းထားသင့်တဲ့ကာလပါပဲ။ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ မေ့ကျန်ခဲ့တာမျိုးကြုံရတတ်တယ်။ အိမ်တွင်းရေးကံမကောင်းပါ။အိမ်ထောင်ဦးစီးကြောင့်တစ်အိမ်သားလုံးသောကရောက်ရလိမ့်မယ်။အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ကာလပါ။ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ စကားများရန်ဖြစ်ရတတ်သည်။ အိမ်မကပ်ချင်ဘဲ အိမ်နဲ့အဝေးကိုသွားချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်နေမည်။ မိသားစုအတွက် အချိန်ကုန်၊ လူပန်းခံပြီး ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စများမှ အကျိုးကောင်းမရလာနိုင်ပါ။ မိမိဆန္ဒအား ဦးစားမပေးပါနှင့်။
ဝေးကွာနေသောသူများ ပြတ်တောက်နေသော အဆက်အသွယ်များနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်မိမယ်။ ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ တစ်ပါးသူအတွက် အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်လူမုန်းခံပြီး ဆောင်ရွက်ရသော အနေအထားရှိလာမယ်။ ထင်ရာလုပ်လိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်နေမယ်။စာရွက်၊ စာတမ်း၊ ငွေရေး၊ကြေးရေး ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာများ ဖြေရှင်းရမယ်။ သူတစ်ပါးအပေါ် ကူညီစာနာခြင်းကြောင့် ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်မယ်။ စီးပွာရေး၌ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများကြုံတွေ့လာနိုင်တယ်။ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပေးအယူလုပ်ငန်းကံကောင်းခြင်းမရှိပါငွေကံကြောင့်စိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတတ်မည်။ရွေအဝင်ထွက်ဖြစ်မည်။
ပညာရေးအပေါ် စိတ်မပါတာမျိုးကြုံရတတ်ပါမည်။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေလဲ အဆင်မပြေကြုံ ရတတ်ပါသည်။ အချစ်ရေးကံမကောင်းပါဘူး။
ယတြာ- မိမိမွေးနေ့တွင် အုန်းထမင်း ဆွမ်းတော်တင်ပါ။
ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူများနှင့် ထိပ်တိ်ုက်ရင်ဆိုင်ရမည်။ ရန်များမည်။ အပြ်ိုင်အဆိုင်၊ အတိုက်အခံများနှင့် ထိပ်တိုက်ကြုံတွေ့မည်။ ရည်ရွယ်ထားသည့်အကြောင်းအရာများ တလွဲတချော်ဖြစ်မည်။ အိမ်တွင်းရေး၊ လူမှုရေးပြဿနာများ ရှိမည်။ သူတစ်ပါးကြောင့် မိမိရည်ရွယ်ချက်နှင့် အလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှ ဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်ရခြင်းရှိမည်။ အတူနေအုပ်စုနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်မည်။ တစ်ပါးသူအတွက် ကြားဝင်၍တာဝန်ယူခြင်း၊ အနစ်နာခံခြင်း၊ သူတစ်ပါးကိစ္စလူမုန်းခံ၍ ပြောဆိုပေးရခြင်းကြုံမည်။ သူများပြဿနာကိုယ့် ပြဿနာဖြစ်တတ်သည်။ အကြီးအကဲငြိုငြင်မှုခံရမည်။ ကိုယ်လုပ်ကိုင်သည့် ကိစ္စ၊ တာဝန်ယူသည့် ကိစ္စအပေါ်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအတာထက်ပို၍ ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ကြားဝင်၍ ငွေကုန်မည်။ စိတ်ထဲမတင်မကျဖြစ်စရာ ဝေခွဲဆုံးဖြတ်ခက်နေတာ မျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ စွပ်စွဲခံနေရမည်။မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းများကြောင့်သင်နှင့်ထင်ပေါ်ရှုပ်ထွေးပြသနာတက်နေမည်။ကဲ့ရဲခံနေရမည်။ ငွေကံမကောင်း၍ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်။သူတစ်ပါး၏အပြစ်ပြောဆိုမှုခံရမည်။သူငယ်ချင်းများ၏အားပေးမှု့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ဖြစ်မည်။
အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ လူများကတော့ သတိထားရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်ပိုင်းမှာ မျက်နှာ ပွင့်တယ်။ သားသမီးရှိရင် သားသမီးအတွက် စိတ်သောကရောက်ရတတ်ပါတယ်။ မကြာခဏ ခရီးထွက်ရတတ်ပါတယ်။ ထွက်လမ်းခရီးကံကောင်းကျိုးမရှိပါ။ နောက်တစ်ခုက ဒီအချိန်ပိုင်းမှာ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာတွေပဲ ကြုံကြုံ တစ်ခါတည်းနဲ့ မပြီးဘူး၊ နှစ်ခါ နှစ်ခါထပ်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ အိမ်မှာ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့ ယောကျာ်းလေး၊ မိန်းကလေးရှိရင်တော့ သတိထားပါဦး။ အိမ်က ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးစိတ်အနှောင့်ယှက်ကြုံတွေ့နေမည်။ ဒီအချိန်ပိုင်းမှာ သင့်အိမ်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ရောက်လာပြီး ညအိပ်ညနေ တည်းခိုရင်၊ ဒါမှ မဟုတ်သင့်အိမ်မှာ နဂိုကတည်းက ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ရှိနေခဲ့ရင် ထီဆုကြီး ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတတ်။ ကျန်းမာရေးတော့ နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါ။ ဦးခေါင်းနဲ့ဝမ်းဗိုက် ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ ဟအိမ်ထောင်ရေး၌ ငွေကိုအကြောင်းပြုပြီး စကားများရမည်။ အချစ်ရေးကံမှာစကားများနေရမယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေလဲ အဆင်မပြေကြုံ ရတတ်ပါတယ်။
ယတြာ-အပတ်စဉ်တိုင်းမွေးနေ့မနက်တွင် ထော်ပတ်ကိတ်မုန့် (၇) ခုအိမ်ဘုရားမှာလှူပါ။
အရာရာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ နေထိုင်သင့်တဲ့ အချိန်ပါ။ စိတ်မလောပါနဲ့ စိတ်မြန်လက်မြန်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ စိတ်ရှည်ရှည်ထားပါ။ ယာဉ်ကား မောင်နှင်းနေသူများ တတ်နိုင်သမျှ သတိနှင့်မောင်းပါ။ စက်ပစ္စည်း၊ ရတနာပစ္စည်းများ အပြောင်းအလဲ အ၀င်အထွက်ဖြစ်ပါမည်။ မိဘများကျန်းမာရေးညံ့တတ်တဲ့ အတွက်ဂရုစိုက်ရပါလိမ့်မည်။ ငွေကုန်ကြေးကျများပါလိမ့်မည်။ လာဘ်ကတော့ရွှင်ပါတယ်။ သူများငွေ ၊အများပိုင်ငွေ လက်မခံပါနဲ့ လက်ခံမိပါစေနှင့်။ အိုးအိမ်ကိစ္စ ၊နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအဆင်ပြေချောမွေ့ပါတယ်။ မုန်းနေတဲ့သူများကပင် အကူအညီပေးတော့မယ်။ မပေါင်းဖူးသော မိတ်ဆွေသစ်များနှင့်ကြုံတွေ့မယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း၊ စပ်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းများ အထင်အမြင်လွဲစရာများ ဖြစ်တတ်မယ်။ မိသာစုရေး သံသယ၀င်ခြင်းနှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းများဖြစ်ကိန်းရှိ၍ဂရုစိုက်နေထိုင်ရန်လို့အပ်တယ်။ စိတ်ကူးထားတာ ရည်မှန်းထားတာတွေ အံ့သြစရာကောင်းစွာ ပြည့်မြောက်လာပါလိမ့်မယ်။ နှုတ်စောင့်စည်းပါ။ ပြောတဲ့အတိုင်းကြုံရတတ်လို့ပါ။ ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားခြင်းနှင့်ထင်ပေါ်စီးပွားတိုးမည်။ အလှူအတန်းကိစ္စများ မုချကူညီလုပ်ရမယ်။ ဒီအချိန်ပိုင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ကြုံရပါမယ်။ အကြံအစည်ပြောင်းတတ်မည်။အတွေးအခေါ်ပြောင်းတတ်မည်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါ အောက်ဆုံးကို ရောက်နေတဲ့သူတောင် အထက်ဆုံးကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပေါ်နှိမ်ချင်တဲ့ လူက ဘယ်လောက်နှိမ်နှိမ် ကံတရားက မျက်နှာသာပေးပြီ ကိုယ့်လုပ်သမျှအားလုံးက လက်ပိုက် ကြည့်နေရမည့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပါးသူကြားကိစ္စများ အရမ်းမ၀င်ပါနှင့် ဝင်ပါကရှုပ်ထွေးတတ်ပါမယ်။ ကံဇာတာမှာအကောင်းတွေချည်းပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ အရင်တုန်းက ဘယ်လောက်ညံ့ညံ့အခုအခါမှာ မျက်လှည့်ပြလိုက်သလို ဖြတ်ကနဲ ပြောင်းပြီး. ဂွပ်ကနဲ. ကောင်းပြီး။စုလာဘ့်စိုက်တဲ့ စိုင်ကော်လို့ချုံပေါ်ရောက်လာတဲ့လာဘ်ကောင်းကိန်းမျိုးပါပဲ။ ပညာရေးရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်။ ပညာရေးက ကြိုးစားသလောက်ထွန်းပေါက်မှာပါ။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးမှာ စန်းပွင့်နေမည်။
ယတြာ – တန်ခိုးကြီးဘုရားများတွင် တံမြတ်စည်း၂လက် နှင့် သောက်ရေအိုးလှူပေးပါ။
မိတ်ဆွေများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီး ဘဝမှာအခက်ခဲမရှိ အောင်းမြင်သောနေ့ရက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ
ခုနှဈရကျ သားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ၁ လပိုငျးအတှကျ ဟောစာတမျး
စီးပှားရေးလုပျငနျးတိုးခြဲ့ခွငျး/ဌာနနရောပွောငျးရှရေ့ခွငျး မြားပွုလုပျရမညျ။ စီးပှားရေးအောငျမွငျမညျ။ ငှခြေေးငှားခွငျးစပျတူရှယျယာလုပျခွငျးအထူးရှောငျကွဉျပါ။ဟဆုံးရှုံးထားသောငှမြေားပွနျလညျရရှိမယျ။ ရပျဝေးနယျဝေးသို့ခရီးထှကျရမညျ။ အတညျတကလြုပျရသညျ့လုပျငနျးမြားအဆငျပွမေယျ။ နိုငျငံခွားခရီးကံကောငျးမညျ။ လူမြိုးခွားအကြိုးပေးမညျ။ အနုပညာရပျတှမှော ထူးခြှနျတတျသညျ။ သှားကိုကျသှားနာသတိပွုပါ။ ရာထူးတိုးပွီး အလုပျပွောငျးရကိနျးရှိသညျ။ ဘုရားဖူးခရီးထှကျရတတျသညျ။ သူတဈပါးထံမှ ငှမေခြေးရ။ မွောကျအရပျသို့ ခရီးမသှားရ။ စီးပှားရေးဤလတဝကျထိ သိပျအဆငျမပွမှေု့မြားနှငျ့ဖွဈနမေညျ။ ကှဲကှာနသေောမိတျဆှမြေားမိသားစုမြားနှငျ့ပွနျလညျဆုံတှဖွေ့ဈမညျ။။ ဆုံးရှုံးထားသောငှမြေားပွနျလညျရရှိတတျမယျ။မိတျဆှအေပေါငျးသငျးခဈြသူခငျသူမိသာစုးအတှကျစိတျပူပေးရတတျတယျ။အဆိုးအညံ့အလုံးစုံကငျးစငျ၍အလိုဆန်ဒရညျရှယျခကျြအောငျမွငျမယျ။ ငှကွေေးကံကောငျးမယျ။ အလုပျအဆငျ့တိုးတကျ ပွီး ဆောငျရှကျရသညျ့ ကိစ်စမှနျသမြှတှငျ အတိုကျအခံမြားလိမျ့မညျ။ စာရငျးဇယား ပွဿနာမြား ဖွရှေငျးရတတျသညျ။
အခဈြရေးမှာခဈြသူနှဈဦး အတှကျ ပြျောစရာအကောငျးဆုံးသာယာခမျြးမွဖေို့အကောငျးဆုံးကာလပါ။ ခဈြနပွေီးသူတှေ လကျ ထပျဖို့ တာစူနကွေသူတှဆေိုရငျတော့ ဒီနှဈထဲမှာ ထိမျးမွားဖို့ အခွအေနပေေးတတျပါတယျ။ ဘယျလို အနှောငျ့အယှကျမြိုးတှပေဲ ရှိနနေေ၊ လကျထပျဖို့စီစဉျထားရငျမလှဲမသှအေောငျမွငျမှာပါ ခဈြသူဘဝမှာ ပြျောရှငျကွညျနူးရသလို တဈဘကျ ကလညျးစီးပှားတကျရာထူးတကျပွီးအဆငျပွမေယျ။ ပညာရေးမှာတခွားမညျ့သညျ့စာမေးပှဲပဲဖွဈဖွဈအောငျနိုငျတယျ။ ဆောငျရှကျထားတဲ့ ကိစ်စတှပွေီး ပွတျနိုငျတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ တခွားလူမှုရေးသောက၊ စီးပှားရေးသောကပညာရေးသောကတှေ ကငျးစငျ နတောကွောငျ့ အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီးစိတျကူးသမြှ အကောငျအထညျဖျောပွီး ခဈြနိုငျကွပါမညျ။ အိမျထောငျရေးလညျးကောငျးပါမညျ။
ယတွာ-မိမိမှေးနံဂွိုဟျဘုရားတှငျ ထောပတျဆီမီး (၇) ခှကျ ထှနျးညှိပူဇျောပါ။ သို့မဟုတျ မီးခြောငျး ၊ ဖနျခြောငျး ၊ ရောငျစုံမီးသီးမြား လှုဒါနျးပါ။
ဆှမြေိုး၊ မိသားစုတို့၏ အခကျအခဲမြား၊ ပွဿနာမြားကို တာဝနျယူဖွရှေငျးပေးရမညျ။အထငျလှဲခံရမယျ။ အလုပျ၌အထူးကံကောငျးလာပွီးဆရာကောငျးနှငျ့တှဆေုံ့မညျ။ျလူမှုရေး၌အထူးလူခဈြလူခငျပျေါမြားမညျ။မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးနှငျ့ဆကျဆံရေးမပွပွေဈစကောမူတပညျ့လကျသားအလုပျသမားမိတျဆှတေို့နှငျ့အဆငျပွတေိုးတကျကောငျးမှနျနိုငျသညျ။ ဘာကိုပဲလုပျလုပျ ရှသေို့မရောကျဘဲ တိုးလို့တနျးလနျးဖွဈနမေညျ။ ဟိုဟာလုပျရကောငျးနိုးနိုး ဒီဟာ လုပျရကောငျးနိုးနိုး နဲ့ အခြိနျကုနျသှားတတျပါမညျ။ ဒုက်ခကွီးကွီးမားမား မဟုတျသျောလညျး စိတျအနှောကျယှကျ ဖွဈစရာတှတေော့ကွုံရတတျပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာကံကောငျးခငျြရငျတော့ဘာပဲလုပျလုပျမွနျမွနျလုပျပါ။ ဖွတျကနဲပျေါ ဆတျကနဲခကျြခငျြးထလုပျပါ။ အဲ့လိုလုပျနိုငျရငျတော့ကောငျးပါတယျ။ လုပျငနျးမြားတှငျအနှောငျ့အယှကျမြားနှငျ့ကွုံတှရေ့မညျ။စိတျပကျြစရာမြားကွုံတှရေ့တတျမညျ။အမြားနှငျ့အတိုကျအခံဖွဈရမညျ။ငှအေကုနျအကမြားနမေညျ။ကမျြးမာရေးဝမျးဗိုကျဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။ပညာရေးမှာအောငျမွငျ မှု့ မြားခံစားရပါမယျ။ အလုပျအကိုငျမြားမှာတော့ ကုနျသှယျမှု မြား အောငျမွငျမှုရနပွေီးတခြို့အလုပျမြားပွသနာအခကျခဲတှကွေုံ့ပါမယျ။ အထကျပုဂ်ဂိုလျကောငျးမြားမစ၍အလုပျ၌အဆငျပွလောတော့မယျ။ မိတျကောငျးဆရာကောငျးတှေ တှမေ့ယျ။ ပညာရေးကိစ်စ၊ သငျတနျးကိစ်စ၊ စာမေးပှဲကိစ်စတှေ အထူးကောငျးပါတယျ။ စပျတူကိစ်စတှလေညျး အောငျမွငျမယျ။ စာခြုပျခြုပျရမယျ့ကိစ်စတှလေညျး အဆငျပွမေယျ။မထငျမှတျတဲ့ ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ အခှငျ့အလမျးကောငျးတှေ ပျေါလာတတျပါတယျ။ ရာထူးနရောကိစ်စတှမှောလညျး အနှောငျ့အယှကျတှကွေားက အောငျမွငျသှားတတျပါတယျ။ စပျတူအလုပျမြားသတိထားပါ။
အိမျထောငျရေးကိစ်စမှာ စိတျသဘောထားအဆငျမပွကွေုံတှတေ့တျမယျ။ အိမျထောငျရေး အတှငျးလူ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။အခဈြနဲ့ပတျသကျပွီ ပြျောစရာအကောငျး ဆုံး ကာလပါ။ ခဈြသူနဲ့စိတျသဘောထားခွငျးတိုကျ ဆိုငျပွီး အပူအပငျမရှိ သာယာကွညျနူးရမယျ၊ ခဈြသူမဖွဈသေးရငျလဲ ကိုယျကစှဲလမျးနေ သူရဲ့ ခေါငျးညိတျအဖွစေကားကို ကွားရမယျ၊ ခဈြသူ ဟာကိုယျ့အလိုဆန်ဒကို လိုကျလြောလှနျးတာကွောငျ့ သတိတရားတော့ရှိရမယျ၊ ခဈြသူအပျေါ စောငျ့ထိနျး ရမယျ့ သိက်ခာတရားကို စောငျ့ထိနျးကွရမညျ။ အနဝေေးနတေဲ့ခဈြသူတှအေတှကျကအလှမျးတသသနဲ့အနဝေေးခွငျး ဒဏျကိုအလှမျးကပြွီးခံစားနပေါမယျ။?အခဈြရေး၌ဤအဖွဈပကျြတှကွေိုတငျ သတိထားပွီးဆငျခွငျနိုငျရငျတော့နှလုံးသားရေးရာနဲ့ပတျသကျပွီးဘာမှစိတျသောက ပှားစရာမလိုပါဘူး။
ယတွာ-မိမိမှေးနေ့၌ ဘုရားမှာ ရှသေင်ျကနျးကပျလှူပါ။ ဆီထမငျး ကပျလှုပူဇျောပါ။
ငှကွေေးမွောကျမြားစှာ ၀ငျမညျ။ အလှူဒါနမြား ပွုလုပျရမညျ။ အမှုအခငျး ကိစ်စမြား ပွဿနာမြား အောငျမွငျစှာ ဖွရှေငျးနိုငျတတျမညျ။ သှားလရော မကျြနှာပှငျ့လနျးမယျ။ စီးပှားရေးအထူးကောငျးမဲ့အခြိနျပါပဲ။ အလုပျအကိုငျမှာ ပွိုငျဆိုငျမှု့မြား တှေ့ ရမညျ။ လုပျငနျးမြားတိုးခြဲ့ တီ့ထှငျခွငျးအလုပျအသဈစတငျခွငျး အထူးကောငျးပါလိမျ့မညျ။ ငှကွေေးလဲအဖကျဖကျကဝငျလာတတျပါတယျ။ ဆိုငျခနျးကိစ်စ၊အိမျကိစ်စ၊အလုပျကိစ်စ အခကျအခဲ့ကွုံနသေူမြားပွနျအဆငျပွလေိမျ့မယျ။စပျတူကိစ်စ၊ ရှယျယာကိစ်စမြားလုပျကိုငျ၍ အကြိုးပေးလိမျ့မယျ။ ဘာသာရေးနဲ့ပကျသကျသော ပစ်စညျးမြားလကျဆောငျရမယျ။ ပညာရေးကိစ်စ ၊အငျတာဗြူးကိစ်စ၊အောငျမွငျမယျ။ အရာရာစိတျမောလူမောပွီးလုပျဆောငျနရေမယျ။ဘာလုပျလုပျ တလှဲတခြျောဖွဈနတေတျသျောလညျး စီးပှားရေး၌ သိသိသာသာစီးပှားတကျမညျ။သိကွားမ လိုကျသကဲ့သို့ လကျရှိအခွအေနထေကျမြားစှာမွငျ့တကျသှားလိမျ့မယျ။လုပျငနျးမြား သိသိသာသာ အောငျမွငျမူ့ရမညျ။ လုပျငနျသဈမြား စတငျပွု လုပျနိုငျသောကာလဖွဈပါတယျ။ အဝေး၌ရှိမိတျဆှမြေားအကူအညီရကိနျးရှိတယျ။ စနဈတကလြုပျကိုငျထားသညျမြား မသခြော မရရောသော အနအေထားသို့ရောကျရှိမညျ။ လကျဆငျ့ကမျးတာဝနျယူသူ ပေါ့လြော့၍ ဆောငျရှကျထားသညျမြား ဖရိုဖရဲဖွဈလိမျ့မညျ။ ငှကွေေးအပေးအယူကိစ်စမှနျသမြှ သတိနှငျ့ ဆောငျရှကျပါ။ အပွောငျးအလဲကိစ်စအတှကျ ဆောငျရှကျရနျ အခါကောငျးကရြောကျနပေါပွီ။ ရငျးနှီးသူမြားနှငျ့ စကားမြားရမညျ။ သဈလှငျသော အလုပျကိစ်စမြားကို ဦးတညျနဆေဲ ပွဿနာဟောငျးမြား ပွနျလညျဖွရှေငျးရမယျ။ လူမြိုးဘာသာမတူခွားနားသော သူမြားနှငျ့ တှဲဖကျလုပျသော ကိစ်စမြားမှ အောငျမွငျမှု့ရမညျ။ တရားမြှတမှုခုံမငျမညျ။ ဘုရားဖူးခရီးမြား စိတျခမျြးသာစရာခရီးမြား ပွညျတှငျးပွညျပခရီးမြား သှားရလိမျ့မညျ။ ခရီးဝေးယာယီမြားလညျးသှားကောငျး၏။အဖိုးတနျကြောကျ။ကား မွကေိစ်စ၊ အမှကေိစ်စမြား အဆငျပွမေညျ။ ငှရှောရလှယျခွငျး ငှအေဝငျအထှကျ ကွမျးခွငျးမြား ကွုံလိမျ့မညျ။ ရနျမြားခွငျးစကားမြားဖွရှေငျးရခွငျး/အထူးသတိပွုရနျ အလုပျတှငျ အတိုကျအခံ အနညျးငယျကွုံရတတျပါသညျ။ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြား လုပျလြှငျအောငျမွငျမညျ။ ပညာရေးကံကောငျးပါသညျ။ ကနျြးမားရေးအနညျးငယျညံ့လိမျ့မညျ။
အိမျထောငျရေးကံကောငျး၍အဆငျပွပေါမညျ။အခဈြရေးမှာအပြို လူပြိုဖွဈလြှငျ ခဈြခငျသူနှငျ့တှရေ့တတျသညျ။ ခဈြရမယျ့သူနှငျ့ဆုံတှလေိ့မျ့မညျ ။ ခဈြသူရှိပွီးသား သူတှအေဖို့တော့ ထူးထူးခွားခွား မရှိနိုငျပါဘူး၊ သာယာခမျြးမွေ.တဲ့အခဈြ သကျတမျးကာလလေးပေါ့တဈခုတော့ထူးခွားပါတယျ။ အခဈြရေးကံစနျးပှငျ့နတေဲ့ကာလဖွဈပါတယျ။
ယတွာ- အိမျဘုရားတှငျ ပနျးသီး ရလုံးကပျလှုပေးပါ။ မတ်ေတာသုတျ ရှတျဖတျပေးပါ။
မမြှျောလငျ့ဘဲ အောကျလကျငယျသားတှရေဲ့ ဆနျ့ကငျြ တျောလှနျတာတှကေို ခံရတတျသညျ။ လုပျငနျးတှမှော အခကျအခဲတှကွေုံ တှရေ့လိမျ့မယျ။ မမြှျောလငျ့ပဲ စိတျညဈစရာတှေ ရောကျလာတတျပါတယျ။ လုပျနရေတဲ့ အလုပျကိုလညျး စိတျမဝငျစားတော့ဘဲ စိတျလနေတေတျပါတယျ။ လကျရှိ အလုပျကနေ တခွားအလုပျကို ပွောငျးလိုစိတျ ပျေါတတျပါတယျ။ မပွောငျးပါနဲ့။ လကျရှိအလုပျက တျောသေးတယျ။ သူတဈပါးအတှကျ အာမခံပေးတာမြိုး၊ ကိုယျစားလိုကျပွီး ပွောပေးတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။ ဒုက်ခရောကျ တတျပါတယျ။ ကိုယျ့ငှတှေေ သူမြားလကျထဲသှားပွီး မွုပျနတေတျပါတယျ။ ခါးနာတာတို့၊ ခွထေောကျနာတာတို့လညျး ဖွဈတတျပါသေးတယျ။ အိမျတှငျးရေးလညျး အဆငျမပွဖွေဈတတျပါတယျ။ အပြျောအပါးကိစ်စရပျမြားဖွဈပျေါနတေတျပါတယျ။အပေါငျးဖျောခဈြသူခငျသူမိသားစုနှငျ့အတူတကှနထေိုငျရတတျပါတယျ။ ငှဝေငျသလောကျပွနျလညျကုနျဆုံးတတျမညျ။အလုပျ၌ကံမကောငျး၍ သူတဈပါးနှငျ့စကားမြားရတတျတယျ။ငှကေံအာမခံမှုမြားမလုပျပါနှငျ့ လုပျလြှငျ့ပွသနာအကွီးအကွယျဖွဈကိနျးကွုံမညျ။ စနျးပှငျ့၍လူခဈြလူခငျပျေါမြားတတျပါတယျ။
အခဈြရေးမှာခဈြသူဟာကိုယျအပျေါကိုမကောငျးမွငျနလေိမျ့မယျ၊ သံသယတှဝေငျနတေတျပါမယျ။ တခွားအဆငျမပွစေရာတှေ၊ စိတျညဈစရာတှကွေုံနရေတာကွောငျ့ ခဈြသူ (သို့မဟုတျ)အိမျထောငျဘကျတို့ရဲ့ ပွဈတငျပွောဆိုခွငျးကို မခံနိုငျပဲအတိုကျအခံတှဖွေဈလာ တတျတယျ။ ဒီအတိုကျအခံတှရေဲ့ နောကျဆုံးရလဒျကတော့သံယောဇဉျကွိုးလေး ပွတျတောကျသှားရခွငျးပါပဲ။ အဲ့ဒါကိုသတိလေးနဲ့နပေေးရငျအဆငျပွပေါတယျ။ ခဈြသူဆီက အခဈြအဖွကေိုတောငျးခံငံ့လငျ့နသေူတှအေတှကျတော့ ဒီနှဈထဲမှာစိတျခမျြးသာရမယျ့အဖွေ မရရှိနိုငျဘူး၊ သူဟာကိုယျ့ရဲ့စကားတှေ ကို မယုံမကွညျဖွဈနသေေးတယျ။ ပွီးတော့ကိုယျ့ရဲ့ အားနညျးခကျြတဈခြို့ကွောငျ့ အထငျသေးပွီးခဈြဖို့ မဝံ့မရဲဖွဈပမေယျ့ တခြို့အားသာခကျြကစနျးပှငျ့နလေို့ ခဈြသူသဈရ ရငျခဏတာပဲပြျောရပါမယျ့တညျမွဲတဲ့ခဈြသူမဟုတျလို့ပါ။ ခဈြသူရှိတဲ့သူတှေ (သို့မဟုတျ)အိမျထောငျရှိတဲ့သူတှကေ တခွားသူရဲအရိပျပွလို့တိတျတိတျပုနျးအဲ့ဒီဘကျဇာတျလမျးစခငျြစိတျ ပေါကျပါမယျ။ပညာရေးကံကောငျးပါတယျ။ ကနျြးမာရေးနညျးနညျးဂရုစိုကျပါ။
ယတွာ- မိမိမှေးနံ့ဂွိုဟျထောငျ့တှငျ နှားနို့နှငျ့ ရေ သပ်ပါယျပေးပါ။
ကံတရားကိုဉာဏျကစားနခြေိနျပွောငျးလဲမှုမြားကွောငျ့တကျလမျးပှငျ့နမေညျ။လူတကာ၏ လှိုကျလှဲပြူငှာစှာ အရေးပေးမှုကို ခံရလိမျ့မညျ။ ကြေးဇူးတုံ့ပွနျမှု ခံရဖှယျရှိမယျ။ လောဘကို အတောငျမတပျဘဲ ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျလုပျဆောငျပါ။ အောကျလကျငယျသားအတှကျ ဝမျးသာစရာတှေ ကွုံမယျ။ ပွဿနာတဈခု အလိုလိုရှငျးသှားမယျ။ သူမြားအတှကျစိတျပူပငျသောက ရောကျနခြေိနျမိမိကွိုးစားခဲ့သမြှအဆငျပွလော၍ပြျောရှငျနရေမယျ။ စီးပှားရေးမှ သတိထားရမှာက စပျတူရှယျယာမြားအရူံးပျေါနခြေိနျပါ ဂရုစိုကျပါ။ အပေါငျးသငျးမြားကွောငျ့စိတျသောကအနညျးငယျရောကျနရေတတျမညျ။စီးပှားရေး၌ကံကောငျးခွငျးအကြိုးကိုစ၍ခံစားရမညျ။ရပျတနျ့ထားသညျ့အလုပျမြားပွနျလညျစတငျနိုငျမညျ။ ပိတျဆိျု့နသေောငှကေံမြား ပွနျပှငျ့မညျ။ စိတျကူးသဈမြား ဆောငျရှကျအောငျမွငျမညျ။ ဝေးကှာနသေောသူမြားနှငျ့ ပွနျလညျဆုံစညျးတတျသညျ။ အဆုံးသတျထားသညျ့ ကိစ်စမြား ထပျမံရှတေို့းဆောငျရှကျရမယျ။ မိတျဆှကေောငျးမြားထံမှ အထောကျအကူရမညျ။ လုပျငနျးလုပျနသေောသူမြား ဝငျငှတေိုးခွငျးရာထူးတကျခွငျး၊ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးလုပျသူမြား အလုပျအဆငျပွေ၍ အတကျလမျးမွငျတှရေ့မယျ။
သူတဈပါးစကား နားမထောငျပါနှငျ့။ ဆုံးဖွတျထားသညျ့အတိုငျး ဆကျလုပျပါ။
အိုးအိမျနရောထိုငျခငျးကိစ်စမြား အဆငျပွမေညျ။အိမျရောငျးအိမျဝယျအောငျမွငျမညျ။ ယခငျဆောငျရှကျပွီး အဆုံးမသတျရသေးသော ကိစ်စမြားကို ပွီးမွောကျအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျလိမျ့မညျ။ လမျးခှဲသူမှ ကိုယျ့အပျေါ ဒုက်ခပေးလာတတျသညျ။ ပညာရေးကံကောငျး၍အောငျမွငျမညျ။အိမျထောငျရေးကံကောငျးမညျ။။ အခဈြရေးမှာ မိမိ၏နှလုံးသားရငျခုနျသံကို မိဘမြား၏ ဆန်ဒကွောငျ့ ဘရိတျအုပျရပျတနျ့ရလိမျ့မညျ။
ယတွာ- မိမိမှေးနတှေ့ငျ ရနေသေတ်တဝါအား ပေါကျပေါကျ ၊ ပေါငျမုနျ့ ကြှေးပါ။
စတေနာအပျေါ တနျဖိုးမထားသောသူမြားနှငျ့ နားလညျမှု့မရှိ၊ အတ်တကွီးမားသော သူမြားကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈမညျ။ လူပေါငျးမှားခွငျး၊ ဆုံးဖွတျခကျြမှားခွငျးမြား ဖွဈမယျ။ လုပျကိုငျနသေော လုပျငနျးမြား တစစရပျတနျ့ခငျြစိတျပေါကျလာမညျ။ မိသားစုဝငျမြား တဈဦးပွီးတဈဦး ကနျြးမာရေးအညံ့ဖွဈမညျ။ ဆှမြေိုး၊ မိသားစုတို့၏ အခကျအခဲမြား၊ ပွဿနာမြားကို တာဝနျယူဖွရှေငျးပေးရမညျ။ ဆုံးရှုံးထားသော ငှပွေနျရပွီးမှ ကုနျဆုံးတတျသညျ။ ခြေးငှားကာပွနျမပေး၊ စကျပစ်စညျးမြား အပကျြအစီးမြားမယျ။ ယာဉျ၊ကားအဝငျမတျောပါ။ ကနျြးမာရေးလဲ အနညျးငယျညံ့နတေတျပါတယျ။ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှရေဲ့အုပျစုဖှဲ့တိုကျခိုကျခွငျးတှခေံရတတျပါတယျ။ ရငျးနှီးသူတှနေဲ့ စကားမြားခှဲခှာရမဲ့အခြိနျပါပဲ။ မသှားခငျြတဲ့ခရီးတှသှေားရတတျပါတယျ။အလုပျကိစ်စတှေ၊လူမှုရေးကိစ်စတှကွေောငျ့အိမျမကပျဖွဈရတတျပါတယျ။ မြျောလငျ့ထားတာတှေ အထဈအငေါ့ကွုံပွီးမှ အဆငျပွလေိမျ့မယျ။ စကျပစ်စညျးမြား လြှပျစဈပစ်စညျးမြားအဝငျမခံသငျ့တဲ့ကာလပါပဲ။ ခရီးဝေးကိစ်စ နိုငျငံခွားကိစ်စခဏဆိုငျးထားသငျ့တဲ့ကာလပါပဲ။ အဖိုးတနျပစ်စညျးမြား မကေ့နျြခဲ့တာမြိုးကွုံရတတျတယျ။ အိမျတှငျးရေးကံမကောငျးပါ။အိမျထောငျဦးစီးကွောငျ့တဈအိမျသားလုံးသောကရောကျရလိမျ့မယျ။အိမျထောငျရေးအဆငျမပွတေဲ့ကာလပါ။ အိမျထောငျဖကျနဲ့ စကားမြားရနျဖွဈရတတျသညျ။ အိမျမကပျခငျြဘဲ အိမျနဲ့အဝေးကိုသှားခငျြစိတျဖွဈပျေါနမေညျ။ မိသားစုအတှကျ အခြိနျကုနျ၊ လူပနျးခံပွီး ဆောငျရှကျသညျ့ကိစ်စမြားမှ အကြိုးကောငျးမရလာနိုငျပါ။ မိမိဆန်ဒအား ဦးစားမပေးပါနှငျ့။
ဝေးကှာနသေောသူမြား ပွတျတောကျနသေော အဆကျအသှယျမြားနှငျ့ ပွနျလညျခြိတျဆကျမိမယျ။ ကိုယျ့ကိစ်စမဟုတျဘဲ တဈပါးသူအတှကျ အခြိနျကုနျ၊ ငှကေုနျလူမုနျးခံပွီး ဆောငျရှကျရသော အနအေထားရှိလာမယျ။ ထငျရာလုပျလိုစိတျမြား ဖွဈပျေါနမေယျ။စာရှကျ၊ စာတမျး၊ ငှရေေး၊ကွေးရေး ကိစ်စမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပွဿနာမြား ဖွရှေငျးရမယျ။ သူတဈပါးအပျေါ ကူညီစာနာခွငျးကွောငျ့ ပွဿနာမြားဖွဈပျေါမယျ။ စီးပှာရေး၌ဆုံးရှုံးနဈနာမှုမြားကွုံတှလေ့ာနိုငျတယျ။ငှကွေေးဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြားအပေးအယူလုပျငနျးကံကောငျးခွငျးမရှိပါငှကေံကွောငျ့စိတျနှဈခှဖွဈနတေတျမညျ။ရှအေဝငျထှကျဖွဈမညျ။
ပညာရေးအပျေါ စိတျမပါတာမြိုးကွုံရတတျပါမညျ။ အခဈြရေးကိစ်စတှလေဲ အဆငျမပွကွေုံ ရတတျပါသညျ။ အခဈြရေးကံမကောငျးပါဘူး။
ယတွာ- မိမိမှေးနတှေ့ငျ အုနျးထမငျး ဆှမျးတျောတငျပါ။
ဆနျ့ကငျြဘကျပွုသူမြားနှငျ့ ထိပျတျိုကျရငျဆိုငျရမညျ။ ရနျမြားမညျ။ အပျွိုငျအဆိုငျ၊ အတိုကျအခံမြားနှငျ့ ထိပျတိုကျကွုံတှမေ့ညျ။ ရညျရှယျထားသညျ့အကွောငျးအရာမြား တလှဲတခြျောဖွဈမညျ။ အိမျတှငျးရေး၊ လူမှုရေးပွဿနာမြား ရှိမညျ။ သူတဈပါးကွောငျ့ မိမိရညျရှယျခကျြနှငျ့ အလုပျကိစ်စမှနျသမြှ ဆိုငျးငံ့ရပျတနျ့ရခွငျးရှိမညျ။ အတူနအေုပျစုနှငျ့ ပဋိပက်ခဖွဈမညျ။ တဈပါးသူအတှကျ ကွားဝငျ၍တာဝနျယူခွငျး၊ အနဈနာခံခွငျး၊ သူတဈပါးကိစ်စလူမုနျးခံ၍ ပွောဆိုပေးရခွငျးကွုံမညျ။ သူမြားပွဿနာကိုယျ့ ပွဿနာဖွဈတတျသညျ။ အကွီးအကဲငွိုငွငျမှုခံရမညျ။ ကိုယျလုပျကျိုငျသညျ့ ကိစ်စ၊ တာဝနျယူသညျ့ ကိစ်စအပျေါသတျမှတျထားသညျ့အတိုငျးအတာထကျပို၍ ကောငျးမှနျအောငျဆောငျရှကျမှုကွောငျ့ ကွားဝငျ၍ ငှကေုနျမညျ။ စိတျထဲမတငျမကဖြွဈစရာ ဝခှေဲဆုံးဖွတျခကျနတော မြိုးကွုံရတတျပါတယျ။ စှပျစှဲခံနရေမညျ။မိတျဆှအေပေါငျးသငျးမြားကွောငျ့သငျနှငျ့ထငျပျေါရှုပျထှေးပွသနာတကျနမေညျ။ကဲ့ရဲခံနရေမညျ။ ငှကေံမကောငျး၍ဆုံးရှုံးမှုရှိသညျ။သူတဈပါး၏အပွဈပွောဆိုမှုခံရမညျ။သူငယျခငျြးမြား၏အားပေးမှု့အတိုငျးလုပျဆောငျဖွဈမညျ။
အိမျထောငျရှိတဲ့ လူမြားကတော့ သတိထားရပါမယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ဒီအခြိနျပိုငျးမှာ မကျြနှာ ပှငျ့တယျ။ သားသမီးရှိရငျ သားသမီးအတှကျ စိတျသောကရောကျရတတျပါတယျ။ မကွာခဏ ခရီးထှကျရတတျပါတယျ။ ထှကျလမျးခရီးကံကောငျးကြိုးမရှိပါ။ နောကျတဈခုက ဒီအခြိနျပိုငျးမှာ ဘာတှပေဲဖွဈဖွဈ၊ ဘာတှပေဲ ကွုံကွုံ တဈခါတညျးနဲ့ မပွီးဘူး၊ နှဈခါ နှဈခါထပျပွီး ဖွဈတတျတဲ့ သဘောရှိတယျ။ အိမျမှာ အရှယျရောကျပွီးတဲ့ ယောကျြားလေး၊ မိနျးကလေးရှိရငျတော့ သတိထားပါဦး။ အိမျက ထှကျသှားတတျပါတယျ။ ပညာရေးစိတျအနှောငျ့ယှကျကွုံတှနေ့မေညျ။ ဒီအခြိနျပိုငျးမှာ သငျ့အိမျကို ကိုယျဝနျဆောငျသညျ ရောကျလာပွီး ညအိပျညနေ တညျးခိုရငျ၊ ဒါမှ မဟုတျသငျ့အိမျမှာ နဂိုကတညျးက ကိုယျဝနျဆောငျသညျရှိနခေဲ့ရငျ ထီဆုကွီး ပေါကျတတျပါတယျ။ ကနျြးမာရေး ထိခိုကျဒဏျရာ ရတတျ။ ကနျြးမာရေးတော့ နညျးနညျးဂရုစိုကျပါ။ ဦးခေါငျးနဲ့ဝမျးဗိုကျ ဒုက်ခပေးတတျပါတယျ။ ဟအိမျထောငျရေး၌ ငှကေိုအကွောငျးပွုပွီး စကားမြားရမညျ။ အခဈြရေးကံမှာစကားမြားနရေမယျ။ အခဈြရေးကိစ်စတှလေဲ အဆငျမပွကွေုံ ရတတျပါတယျ။
ယတွာ-အပတျစဉျတိုငျးမှေးနမေ့နကျတှငျ ထျောပတျကိတျမုနျ့ (၇) ခုအိမျဘုရားမှာလှူပါ။
အရာရာအေးဆေးတညျငွိမျစှာ နထေိုငျသငျ့တဲ့ အခြိနျပါ။ စိတျမလောပါနဲ့ စိတျမွနျလကျမွနျဘာမှမလုပျပါနဲ့ စိတျရှညျရှညျထားပါ။ ယာဉျကား မောငျနှငျးနသေူမြား တတျနိုငျသမြှ သတိနှငျ့မောငျးပါ။ စကျပစ်စညျး၊ ရတနာပစ်စညျးမြား အပွောငျးအလဲ အဝငျအထှကျဖွဈပါမညျ။ မိဘမြားကနျြးမာရေးညံ့တတျတဲ့ အတှကျဂရုစိုကျရပါလိမျ့မညျ။ ငှကေုနျကွေးကမြားပါလိမျ့မညျ။ လာဘျကတော့ရှငျပါတယျ။ သူမြားငှေ ၊အမြားပိုငျငှေ လကျမခံပါနဲ့ လကျခံမိပါစနှေငျ့။ အိုးအိမျကိစ်စ ၊နရောထိုငျခငျးကိစ်စမြားအဆငျပွခြေောမှပေ့ါတယျ။ မုနျးနတေဲ့သူမြားကပငျ အကူအညီပေးတော့မယျ။ မပေါငျးဖူးသော မိတျဆှသေဈမြားနှငျ့ကွုံတှမေ့ယျ။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျး၊ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြား အထငျအမွငျလှဲစရာမြား ဖွဈတတျမယျ။ မိသာစုရေး သံသယဝငျခွငျးနှငျ့ စိတျဝမျးကှဲခွငျးမြားဖွဈကိနျးရှိ၍ဂရုစိုကျနထေိုငျရနျလို့အပျတယျ။ စိတျကူးထားတာ ရညျမှနျးထားတာတှေ အံ့သွစရာကောငျးစှာ ပွညျ့မွောကျလာပါလိမျ့မယျ။ နှုတျစောငျ့စညျးပါ။ ပွောတဲ့အတိုငျးကွုံရတတျလို့ပါ။ ဂုဏျသတငျးကြျောကွားခွငျးနှငျ့ထငျပျေါစီးပှားတိုးမညျ။ အလှူအတနျးကိစ်စမြား မုခကြူညီလုပျရမယျ။ ဒီအခြိနျပိုငျးမှာ အပွောငျးအလဲတှနေဲ့ကွုံရပါမယျ။ အကွံအစညျပွောငျးတတျမညျ။အတှေးအချေါပွောငျးတတျမညျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုးနဲ့ကွုံတဲ့အခါ အောကျဆုံးကို ရောကျနတေဲ့သူတောငျ အထကျဆုံးကိုရောကျသှားနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ့ပျေါနှိမျခငျြတဲ့ လူက ဘယျလောကျနှိမျနှိမျ ကံတရားက မကျြနှာသာပေးပွီ ကိုယျ့လုပျသမြှအားလုံးက လကျပိုကျ ကွညျ့နရေမညျ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ တဈပါးသူကွားကိစ်စမြား အရမျးမဝငျပါနှငျ့ ဝငျပါကရှုပျထှေးတတျပါမယျ။ ကံဇာတာမှာအကောငျးတှခေညျြးပဲ ဖွဈတော့မယျ။ အရငျတုနျးက ဘယျလောကျညံ့ညံ့အခုအခါမှာ မကျြလှညျ့ပွလိုကျသလို ဖွတျကနဲ ပွောငျးပွီး. ဂှပျကနဲ. ကောငျးပွီး။စုလာဘျ့စိုကျတဲ့ စိုငျကျောလို့ခြုံပျေါရောကျလာတဲ့လာဘျကောငျးကိနျးမြိုးပါပဲ။ ပညာရေးရညျမှနျးခကျြအောငျမွငျမယျ။ ပညာရေးက ကွိုးစားသလောကျထှနျးပေါကျမှာပါ။ ငယျရှယျသူမြား အခဈြရေးမှာ စနျးပှငျ့နမေညျ။
ယတွာ – တနျခိုးကွီးဘုရားမြားတှငျ တံမွတျစညျး၂လကျ နှငျ့ သောကျရအေိုးလှူပေးပါ။
မိတျဆှမြေားအားလုံး စိတျခမျြးသာကိုယျကနျြးမာပွီး ဘဝမှာအခကျခဲမရှိ အောငျးမွငျသောနရေ့ကျမြားစှာကို ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ